Tun Tun's Photo Diary: June 2016
at 6/09/2016 12:04:00 AM Links to this post No comments:
2013-Jun-28, ရန်ကုန်ကို ခဏခဏ ရောက်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြို.ပတ်ရထားကို တခါမှ မစီးဖူးပါဘူး။ ရန်ကုန်မှာဆိုရင် ကျောက်မြောင်း မှာနေတယ်။ Tourist တွေ ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေတော့ ခဏခဏ တွေ.ဖူးတော့ စီးဖူးချင်မိတယ်။ အဲ့ဒီနေ.က ရန်ကုန်က ကိုယ့်လိုပဲ ဓါတ်ပုံရိုက်တာ ၀ါသနာပါတဲ့ သူနဲ. ၂ယောက် မြို.ပတ်ရထား စီးပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို. ချိန်းဖြစ်တယ်။ သူကလဲ ကျောက်မြောင်းမှာ နေတာ၊ သူလဲ တခါမှ မစီးဖူးဘူး ဆိုလို. ကျောက်မြောင်း ဘူတာကနေ စီးလိုက်တယ်။
at 6/02/2016 09:33:00 PM Links to this post 1 comment:
Labels: Myanmar, Portrait, Street, Yangon
Yangon Downtown, Sule Pagoda & Mahar Bandular Park...